swe၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မိန်းကလေးNay Pyi TawMyanmar Like0members like this
ဘလော့များ (21)ဆွေးနွေးချက်များ (1)အဖွဲ့များ (1)ဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ swe's Likes Swe's ၏မိတ်ဆွေများ
အားလုံးကြည့်ရန်... swe's Groups
Zin Mar Tun commented on swe's blog post 'သီရိလင်္ကာစွယ်တော်မြတ်'"စွယ်တော်မြတ်အား ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ရသကဲ့သို့အထူးကြည်ညိုမိပါကြောင်း"Feb 5ကိုညီညီတင် leftacomment for swe"ယနေ့မှကျရောက်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၏မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်.. ဆရာတော်ကြီး..အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏သြ၀ါဒတစ်ချို့ကို..မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးပို့လိုက်ပါသည်။ ချမ်းသာပါစေ..၊အေးငြိမ်းပါစေ..၊
၁။ လောကမှာ…"Oct 25, 2012လှိုင်ကျော်ထွေး leftacomment for swe"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့…"Oct 25, 2012လှိုင်ကျော်ထွေး leftacomment for swe"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့…"Oct 25, 2012swe posted blog posts'' မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီ '' ( အပိုင်း-၃ )'' မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီ '' ( အပိုင်း-၂ )'' မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီ '' (အပိုင်း-၁)Sep 27, 2012hla moe 24 leftacomment for swe"လာလယ်သွားပါတယ်"Sep 19, 2012မတင်တင်မိုး leftacomment for swe"မဆွေ လာလည်သွားတယ်နော်"Sep 18, 2012လဲ့ရည်သင်း commented on swe's blog post ''' ဖမ်းခြင်း နှင့် လွှတ်ခြင်း - ရဝေနွယ်(အင်းမ) "'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်သားထားပါမယ်။"Sep 11, 2012hninwarnyo commented on swe's blog post '“ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု” ရဝေနွယ် (အင်းမ)'"တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင် ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ နဂ္ဂတစ် အတွေးပါ။ ပါရမီပါခဲ့ သူတွေဟာ ကြုံလာတဲ့ အာရုံတစ်ခုကို ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ တွေးပြီး စိတ်အေးချမ်းမှုကို ယူသွားကြတာပါ။ အထူးသဖြင့် နဂ္ဂတစ် အတွေးနဲ့ တွေးရင်စိတ်ဆင်းရဲ ရတယ်ဆိုတာ သေချာ သိထားရလို့ပါ။ ဘဝရဲ့…"Sep 9, 2012Tun Khing Win liked swe's blog post '“ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု” ရဝေနွယ် (အင်းမ)'Sep 8, 2012hla moe 24 leftacomment for swe"မဆွေ လာလယ်သွားပါတယ်"Sep 8, 2012khinnandarkhaing commented on swe's blog post '“ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု” ရဝေနွယ် (အင်းမ)'"ဖတ်ရတာအရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်အကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ကြည့်တော့ကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းသာရပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"Sep 6, 2012မတင်တင်မိုး commented on swe's blog post '“ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု” ရဝေနွယ် (အင်းမ)'"မဆွေ အရမ်းကိုတန်ဘိုးရှိတဲ့ ဘလော့ပါ ဖတ်မှတ် နာယူသွားပါတယ်----"Sep 3, 2012နီနီဟန်နီ commented on swe's blog post '“ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု” ရဝေနွယ် (အင်းမ)'"ကြိုးစားလျှက်ပါ ဘုရား..။"Sep 1, 2012နီနီဟန်နီ liked swe's blog post '“ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု” ရဝေနွယ် (အင်းမ)'Sep 1, 2012florance liked swe's blog post '“ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု” ရဝေနွယ် (အင်းမ)'Aug 27, 2012 More... RSS
'' မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီ '' ( အပိုင်း-၃ )
ဒီဘလော့ကို September 27, 2012 တွင်11:00am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
မယ်တော်ကြီးတို့အား သနားဂရုဏာစိတ်ဖြင့် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ပယ်လှန်းထားပြီး သော အကြောင်း ကိစ္စကို လေးကြိမ်မြောက်လျှောက်ထားရပြန်၏။ “ အာနန္ဒာ၊ သာသနာတော်ဝယ် အမျိုးသမီးများ ဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်ရန် မတောင့်တပါလင့် “ လေးကြိမ်မြောက် လျှောက်ထားချက်ကို လေးကြိမ်မြောက် ပယ်လှန်တော်မူလိုက် ၏။ ငါးကြိမ်မြောက် ခြောက်ကြိမ်မြောက် လျှောက်ထားခြင်းတို့မှာလည်း ထို့အတူသာ အပယ်ခံကြရ၏။ ဤသို့ မယ်တော်ကြီး တို့၏ ပုဂ္ဂလအဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် လျှောက်ထား၍ မရနိုင် သဖြင့် အရှင်အာနန္ဒာသည် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် တစ်မျိုးလှည့်၍… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... '' မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီ '' ( အပိုင်း-၂ )
ခမည်းတော်၏ တရားပြသမှုဖြင့် နေသာထိုင်သာရှိလာသော မယ်တော်ကြီး မဟာပဇာပတိ ဂေါတမီသည် သားတော်ဘုရားကို နောက်ထပ်တစ်ဖန် ဖူးမြော်ခွင့်ကြုံလာရ၏။ ထိုအကြိမ်တွင်ကား စိတ် လှုပ်ရှားစရာကိစ္စများ မရှိတော့သဖြင့် ယခင်တစ်ခေါက်က အထမမြောက်ခဲ့သော ကိစ္စကို အထမြောက်အောင် စီမံလေတော့သည်။ ချောမွတ်နူးညံ့လှစွာသော ချည်အကောင်းစားဖြင့် သားတော်ဘုရားအတွက် သင်္ကန်းတစ်စုံစာ
ရရှိအောင် နန်းတော်သူများ၏ အကူအညီဖြင့် ရက်လုပ်ရာ မကြာမီမှာ ပင် ပြီးစီးသွား၏။ ရွှေအဆင်းသို့ ၀ါဝင်းသော သင်္ကန်းတော်ကို နံ့သာသေတ္တာထဲမှာ ထည့်လိုက်၏။… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... '' မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီ '' (အပိုင်း-၁)
ဒီဘလော့ကို September 27, 2012 တွင်10:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီသည်ကား အလောင်းတော်မင်းသားကို နို့ချို တိုက် ကျွေးမွေးမြူလာခဲ့၍ ဘိက္ခုနီအပေါင်းတွင် သိက္ခာဝါအကြီးဆုံးဖြစ်သော (ရတ္တညူ) အရာဌာန၌ ဧတဒဂ်ဂုဏ်ထူးဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သော ရဟန္တာအရှင်မကြီး ဖြစ်ပေသည်။ဤအရှင်မ၏ အလောင်းအလျာသည် ပဒုမတ္တရဘုရားရှင်၏ လက်ထက်တော်တွင် ဟံသာဝတီမြို့ တော်၌ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြွယ်ဝချမ်းသာသော အမတ်ကြီးတစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်ခဲ့၏။တစ်နေ့သ၌ အလောင်းအလျာ အမျိုးကောင်းသမီးသည် ဖခင်အမတ်ကြီး နှင့် တကွ ကျောင်းတော်သို့ သွားရောက်၍ တရားနာ၏။ထိုတရားသဘင်၌ ပဒုမတ္တရဘုရားရှင်သည်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... “ပေါ့စတစ်အတွေးနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု” ရဝေနွယ် (အင်းမ)
ဒီဘလော့ကို August 23, 2012 တွင်4:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 13 Comments
မြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်က ဒန္တိကာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးလေး တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒန္တိကာ အရွယ်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးရဲ့ ဇေတဝန်ကျောင်း ရေစက်ချ အလှုပွဲကြီးနဲ့ ကြုံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီကျောင်း ရေစက်ချပွဲကြီးကိုကြည့်ပြီး သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ချင်တဲ့ စိတ်စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်း မဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒန္တိကာဟာ ဇေတဝန်ကျောင်း ရေစက်ချပြီး နောက်ပိုင်း သာသနာ့ဘောင်ကို မဝင်နိုင်သေးပေမယ့်
သရဏဂုံနဲ့ ငါးပါးသီလကို အမြဲဆောက်တည် နေခဲ့ပါတယ်။ ကာလတစ်ခု ကြာလာတဲ့ အခါမှာတော့ ဒန္တိကာဟာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
အားလုံးကြည့်ရန်... Comment Wall (15 comments)
9:09pm အချိန်October 25, 2012, တွင်ကိုညီညီတင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ယနေ့မှကျရောက်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၏မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်.. ဆရာတော်ကြီး..အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏သြ၀ါဒတစ်ချို့ကို..မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးပို့လိုက်ပါသည်။ ချမ်းသာပါစေ..၊အေးငြိမ်းပါစေ..၊
၁။ လောကမှာ အချစ်ဆုံးသော အရာသည် ဒုက္ခအပေးဆုံးပဲ၊ ချစ်စရာ တစ်ခုရှိလျင် ဒုက္ခတစ်ခု၊ ချစ်စရာများလျင် ဒုက္ခများတယ်၊ ချစ်စရာ မရှိလျင် ဒုက္ခ မရှိတော့ဘူး မှတ်ပါ။
၂။ စိတ်ကြီးဝင်ပြီး အောက်ခြေလွတ်နေတယ် ဆိုတာ ဟိုလူကိုငေါက်၊ ဒီလူကို ငေါက်နဲ့ တချို့များ ပိုက်ဆံပေါလို့ ၊ အာဏာရှိလို့ ရာထူးကြီးလို့ အဖက်မလုပ်ပဲ ဘ၀င်လေဟပ်နေကြတာပဲ။ အဲဒါ စိတ်ကြီးဝင်တာ မဟုတ်ဘူး၊ သံသရာမှာ အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်ဖို့အတွက် စိတ်ကလေးဝင်တာ၊ အဲဒီလို စိတ်မျိုး မမွေးမိစေနဲ့။
၃။ လူတွေဟာ သာသနာရဲ့ အနှစ် သီလ သမာဓိ ပညာကို မကြည်ညိုတတ်ကြပဲ ကျောင်းကောင်း ကန်ကောင်းတွေမှပဲ ကြည်ညိုတတ်ကြတယ်၊
၄။ လောကမှာ ဒါန ရှိမှ လူချစ်ခင်တယ်၊ သီလ ရှိမှ လူကြည်ညို ခံရတယ်၊ ပညာတတ်မှ လေးစား ကြပြန်တယ်။
၅။ ပညာ ဆိုတာ စာပေကိုသာ ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ သူ့အရွယ် နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ လက်မှု့အတတ် အားလုံး ပါဝင်တယ်၊
၆။ ဆရာ ဆိုတာ တပည့်ကို တော်တော်များများမြင်မှ ဆရာလုပ်ရတယ်၊ ဘယ်သူ ဟာ ဘယ်လို အရည်အချင်း ရှိတယ် ဆိုတာ မြင်၇တယ်။ တချို့ တပည့်တွေဟာ ဆရာထက် အရည်အချင်း ပိုသေးတယ်၊ ဘယ်လောက်ပင် ဥာဏ်ကောင်းနေပါစေ ဆရာက မကောင်းလျင် လုံးလည်လိုက်ပြီး မတိုးတက်တော့ဘူး။
၇။ လူတွေဟာ ကောင်းကျိုးကိုသာ မျှော်ကြတယ်၊ ကောင်းတာကိုပဲ ခံစားချင်ကြတယ်၊ အကြောင်းကောင်းအောင်တော့ မလုပ်ချင်ကြဘူး၊ အကြောင်းမကောင်းလျင်တော့ အကျိုးလဲ ခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူး၊
၈။ ယခု ဘုန်းကြီးတို့ သာသနာမှာ ငွေ ကုန်တွေ များနေတယ်၊ ဘုရားပွဲ အလှူပွဲ ကထိန်ပွဲ တွေမှာ မလိုအပ်တဲ့ ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေ များနေပြီး သုံးဖြုန်းနေကြတာပဲ။
၉။ အလှူလုပ်တဲ့ အခါမှာ လူချီးမွမ်း ခံချင်တာ လောဘ၊ ဂုဏ်လိုချင်တာ လောဘ၊ နတ်ပြည်ရောက်ချင်တာလဲ လောဘပဲ။
၁၀။ သူတော်ကောင်း ဆိုတာ သူများနဲ့ ဆက်ဆံလျင် ကိုယ်က အနာခံရတယ်၊ လောဘ ဒေါသတွေကို တတ်နိုင်သမျှ လျော့ချ ထားရတယ်။
၁၁။ သံသရာ အရှည် နှင့် ပုထုဇဉ် အရူး - ခရီးက ရှည်၊ အရူးတွေ၊ စာရေ ( ရိက္ခာ )က သိုး၊ အဖော် ဆိုးသနင့်၊ အမျိုးမျိုး ကာမဂုဏ် အာရုံတွေ အလွန်နောက်တာကြောင့်၊ အပါယ်ဘုံ ခါခါ ရောက်သော်လည်း လွတ်မြောက်ဖို့ ဝေး။
(က) သံသရာ ခရီးက အလွန် ရှည်၏။ (ခ) ခရီးသွားသူတွေက အရူးအနှမ်းတွေသာ၊ (ဂ) သူတို့၏ ဂုဏ် ပကာသန ဒါန သီလ ဘာဝနာ စားနပ် ရိက္ခာသည် နိဗ္ဗာန် မရောက်ခင် ပုပ်သိုးလိမ့်မည်။
(ဃ) သူတို့၏ အဖော်ကား အမြဲပါနေသော တဏှာ ဖြစ်၏။
(င) ထို့ကြောင့် အပါယ်ငရဲ ရောက်သော်လည်း တဏှာ မပျောက်သောကြောင့် သံသရာမှ လွတ်မြောက်ဖို့ အဝေးကြီး ဖြစ်နေ၏။
၁၂။ ကုသိုလ် အကုသိုလ် ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်မိတဲ့ အခါ သေးငယ်တယ်၊ အကျိုးပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အထင်မသေးကြနဲ့။ တံစက်မြိတ် အောက်မှာ ချထားတဲ့ ရေအိုးစရည်းကြီးဟာ တစက်ချင်း ကျသော်လည်း မကြာမီ ပြည့်လာသလို နောင်တချိန်မှာ အကျိုးပေးမှာပဲ။
၁၃။ မွေးနေ့ ဆိုတာ အသက်ကြီးလာတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်တယ်၊ ငါသည် တနှစ်ပို၍ သေဖက် နီးလာပြီ လို့ ဆင်ခြင်ရမယ်၊ အောက်က လင်္ကာလေးကို မရသေးရင် ရအောင် ရွတ်ပြီး မရဏာ နုဿတိ ဘာဝနာဖြစ်အောင် ရွတ်ပါ၊
ငါနှင့် ရွယ်တူ ငါ့အောက်လူ ကြီးသူသေကြ များလှပြီ၊ ခဏမစဲ အိုစမြဲ၊ ကိုယ်လဲ သေဘက် နီးခဲ့ပြီ၊ မသေရမီ ပါရမီ ငါသည် ဖြည့်မှ သင့်တော့မည်၊
အနိစ္စ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ အနတ္တ။
၁၄။ သီလ မကောင်းဘဲ ဘာဝနာကို တက်ဖို့ စိတ်မကူးနဲ့၊ သီလ မကောင်းရင် ဒါနတောင် မသန့်ရှင်းဘူး၊ သူများအထင် မသေးအောင် ဂုဏ်ရှိအောင် ပြုတဲ့ ဒါနဟာ အလွန်ညံ့တဲ့ ဒါနဖြစ်တယ်။
၁၅။ မင်းစည်းစိမ် ကို မင်းရဲ့သားက စိတ်ကူးတယ်၊ သူတောင်းစားက စိတ်မကူးပါ၊ ရဟန္တာ အဖြစ်ကို သူတော်ကောင်းကသာ စိတ်ကူးတယ်၊ သူယုတ်မာက သတိပင် မရပါ။
တောင်မြို့ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ သြ၀ါဒများကို ကောင်းနိုးရာရာ သင့်သလို ဖော်ပြပါသည် 3:53pm အချိန်October 25, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
3:52pm အချိန်October 25, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
12:36pm အချိန်September 19, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလယ်သွားပါတယ် 11:36am အချိန်September 18, 2012, တွင်မတင်တင်မိုး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မဆွေ လာလည်သွားတယ်နော် 11:32am အချိန်September 8, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မဆွေ လာလယ်သွားပါတယ် 7:21pm အချိန်August 3, 2012, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အစ်မရေ ကျနော်အလည်လာသွားပါတယ် လက်ဆောင်လည်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..။ Friends18.com Flowers Scraps
ပန်းလေးတွေလို မွေးပျံပြီး အေးချမ်းပါစေ
11:51am အချိန်June 28, 2012, တွင်ကိုညီညီတင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေအတွက်... အမှတ်တရ..လက်ဆောင်မွန်..ဖြစ်ပါတယ်..။ ဘ၀ခရီးတစ်လျှောက်....
Friends18.com Rose Scraps 6:32pm အချိန်June 22, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မဆွေ လာလယ်သွားပါတယ် 12:54pm အချိန်June 14, 2012, တွင်မတင်တင်မိုး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မဆွေ
လာလည်သွားပါတယ် ကိုယ်တိုင်လဲတရားသိမြင်ပြီး သူတပါးကိုလဲ
တရား ဒါနများ ဆက်လက်လှူဒါန်းနိုင်ပါစေ။ မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
လင်းလင်း ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
moemoe ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
kham ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Aye Marlar Htat
kaungsu ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
မြတ်စွာဘုရား၏ ထူးခြား အံ့သြဖွယ်များ (ဗုဒ္ဓနေ့အတွက်)။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အသိပညာပေးဆောင်ပုဒ်များ (၂) ။
ဘုရားစေတီအချို့ ရှေ့က မနုသီဟ ဖင်နှစ်ခွ အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ပြု ပြော တွေးလျှင် သတိယှဉ်
ကျမနှင့် နောင်တ ..
ဘယ် ကံ က စပါသလဲ
လောကီကုသိုလ်စိတ်ဇောက နိဗ္ဗာန်အစစ်ကို အာရုံပြုနိုင်သလော
အကုသိုလ်တွေ ရှောင်ကြဉ်နေရင် သီလနဲ့ ပြည့်စုံတာပဲ မဟုတ်လား
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သုည၀ါဒဆိုတော့ အနှစ်သာရ မရှိလို့လား
အဘိဓမမ္မာ ပိဋက သမိုင်း အပိုင်း (၃)
ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အသိပညာပေးဆောင်ပုဒ်များ (၁) ။
လောကဓံ တရားနှင့် ကြုံလာရင်...
1. အလှူပွဲကြီး အောင်ပါပြီ.............
2. ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတစ်ခုတွင် ပြောခဲ့တဲ့ ဘာသာကာကွယ်ရေးစကားစု
3. ဣဿာ မစ္ဆရိယ ဟူသည်.....
4. "တရား ဟူသည်"
5. "တရားအားထုတ်ခြင်းသည် အကောင်း ဆုံး စိတ်အပန်းဖြေနည်း"
6. စိတ်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ရှိသလဲ
7. "ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"
8. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (ကလေးတို့ဆရာမနှင့် ဆရာတော်အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)တို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
9. ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လည်ပုံပြတ်ပုံ တရားကို အလွယ်တကူ နားလည် သဘောပေါက်ကြစေရန်။
10. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (အက်ဒမင် ကိုညီညီတင်နှင့် တောသူမလေးတို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
11. အရှင်မောဂ္ဂလန် မထေရ်မြတ်ကြီး အလောင်းတော်, တရားထူးရသွားသော တရားတော်။
12. ၁၃၇၅-ခုနှစ် ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်မည့်ကျောင်းကို အသိပေးကြေညာခြင်း
13. တောင်ပြာတန်းမှာ ကြွေသောပန်းများ(သို့မဟုတ်)ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်စတေး၍ ပေးဆပ်ခဲ့သူများ.. …
14. ဘာသာခြားတစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ရာဝယ်
15. ** ပုရိသတို့အတွက် သတိပြုဖွယ် မြွေအန္တရာယ် **
16. တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ
17. နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် မင်းကိုဘေးဖယ်
18. သောတာပန်၏ ထူးခြားချက်(၇)ရပ်
20. သာသနာပြုခြင်းနှင့် လွဲမှားနေကြသူများ။
Top News · Everything လင်းလင်း replied to Sai Lao Kham's discussion 'မည်သည့်အခါ သာသနာတော် ကွယ်ရပါသလဲ။'"၀ိနည်းသည် သာသနာ၏အသက် ဖြစ်သည်။၀ိနည်းတည်မှ သာသနာတည်မည်ဟု စကားနှစ်ခွန်းသည်…"27 minutes agoဖိုးကံထူး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'လောကုတ္တရာ သင်္ခါရဆိုတာ ဘယ်ဟာမျိုးပါလဲ? မဂ်စိတ် ဖိုလ်စိတ်ဟာ ဒုက္ခသစ္စာလော။'"အကျိုးရှိလှပါတယ် ဘယ်ကနေရှာတွေ့တာလဲအကို ကျနော်မဖတ်ဖူးတာများတယ် မသိတာလဲများပါတယ်"1 hour agoမူကြိုဆရာ posted blog postsဥပုသ် သီလ စောင့် ခြင်း ၏အကျိုး ကျေးဇူးမှာ…..သဲပုံစေတီတော် ပေါ်ပေါက်လာပုံလေးပါ“သမထနှင်.၀ိပဿနာ”(အားထုတ်ယောဂီများအတွက်အထူး)1 more…2 hours agoaung aung soe commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'မကျေနပ်တဲ့ သံယောဇဉ်'""သံယောဇဉ်” နာမည်လှပသလောက် ဒုက္ခပေးရာမှာ ညှာတာမှုကင်းမဲ့လှတယ်လို့…"3 hours agothein wai posted blog postsမြတ်စွာဘုရား၏ ထူးခြား အံ့သြဖွယ်များ (ဗုဒ္ဓနေ့အတွက်)။ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု အသိပညာပေးဆောင်ပုဒ်များ (၂) ။7 hours agoကေခိုင်စိုး liked လင်းကိုကို's discussion သမထ ဘာဝနာနဲ့ ၀ိပသနာ ဘာဝနာ9 hours agoကေခိုင်စိုး replied to yamin's discussion 'ဘာသာခြား ဆန့်ကျင်ရေးတရား'"တရားဟောဆရာတော်တစ်ပါးပြောသလိုပါပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေထက်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ကြ…"10 hours agoKyi Maung commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'အရှေ့ကိုလျှောက်ပါတဲ့ အနောက်ကိုတဲ့မျှော်လိုက်ရင်…'"ဖတ်ရှုမှတ်သားရပါ၏။"11 hours agoKyi Maung commented on အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s blog post 'ဘဝရဲ့စိတ်ပျက်ကြေကွဲချိန်မှာ ပြုံးပါ'"ဖတ်ရှုမှတ်သားရပါ၏။"11 hours agoကေခိုင်စိုး commented on အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post '"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"'"အရှင်ဘုရားပြောတာမှန်ပါတယ်ဘုရား"11 hours agoကေခိုင်စိုး liked အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post '"ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပြတ် ဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သံလျင်မြို့စားငဇင်ကာ"'11 hours agoကေခိုင်စိုး postedastatus"မြင့်မြတ် ၍အပြစ်ကင်းသောလုပ်ဆောင်ခြင်း"11 hours ago 0